Kụ nzọ na NFL dị ụtọ - d e ọ dị mfe karịa ka ị chere - jluis37.com
Kụ nzọ na NFL dị ụtọ – d e ọ dị mfe karịa ka ị chere
Tinggba nzọ na NFL dị ka mmasị a na-ewu ewun’etiti ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu ka ọ na-enweta. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịdị ka ewu ewu dịka ilele egwuregwu. Okwesiri inwe ezi ihe kpatara un mgbe ị na – eche banyere ya – ọ bụ ihe okike zuru oke ịchọrọ itinye aka na oge kachasị amasị gịn’ọtụtụ ụzọ enwere ike.
Ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-akụ nzọ NFL mgbe niile. Nke ukwuu nke only t ọ nwere ike bụrụ egwuregwu kachasị ewu ewu na-egwu ugbu a. Ma ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ ndị ọzọ Fans ga-achọ isonye na egwuregwu ahụ mana na-etinye yan’ihi na ha amaghị ebe ma ọ bụ etu esi amalite. Okwu ndị dị ka’ịkụ nzọ megide mgbasa’ na’parlays’ na’prop stakes’ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya ruon’ókè ike gwụrụ ịkụ nzọ egwuregwu na-enweghị uche.
Mana ezigbo ozi ọma bụ na enyemaka dị nso. Na obere ozi gbasara ozi nwere ike ịga ogologo oge.
Thegba Thegba Ebe A Na-agbasa
Onye ọ bụla nwere mmasị na NFL ịkụ nzọ ga-anụ banyere ịkụ nzọ ebe a na-agbasa. Ma ọ bụ nkwupụta nke a ga-edegharịrị n’ọtụtụ ụzọ: ịkọwa ịkụ nzọ ịkụ nzọ, ịkụ nzọ mgbasa, ọbụnadị ịkụ nzọ megide mgbasa a na-ezo aka n’ụdị edebiri ya, ma ọ bụ ATS (megide mgbasa).
Mgbasa that a na-etinye ụzọ nke bookie ka ọ dịn’ọhịa. Mgbasa ahụ na-ekwupụta na ezughị ezu iji kwuo onye otu mmeri ga-abụ, kamakwa websiten’ọtụtụ isi egwuregwu ga-emeri. Kwado ebe that a na-agbasa nwere ike iyi ụzọ dị egwu na nke dị egwu nke ịga azụmaahịa NFL ịkụ nzọ – ọ nwere ike bụrụ. Ma ozugbo ị ghọtara ọdịdị nke ịkụ nzọ egwuregwu dị ka omume guzozie, ị ga-amụta ngwa ngwa iji ụdị ịgba egwu a maka ọdịmma gị.
Tingkụ nzọ The Moneyline
N’ezie ọ naghị adị mfe nghọta karịa nke a: ịkụ nzọ na ntinye ego. Ya dị mfe dị ka ịwụsa mmiri si na akpụkpọ ụkwụ. Gba chaa chaa dị mfe dị ka ịkọ amụma otu egwuregwu ị chere ga-emeri egwuregwu ahụ. Enweghị azụmahịa na-atọ ọchị. Naanị ihe ị kwesịrị ị na-echeta ruo mgbe ebighị ebi, bụ otu esi edozi aha akwụkwọ. Moneylines nwere ike ịbụ glaringly doro anya dị ka ịghọta otú ha na-arụ ọrụ na-aga, ma ha na-adịghị ekwe niile na ebube dị na nloghachi t self.
NFL ịkụ nzọ dị n’ozuzu ha niile n’oge. Mana t even ekwuru nke a, ha bụ ndị ama ama na NFL Super Bowl. Egwuregwu ndị na-agba ọsọ na-adọrọ adọrọ nke ukwuu maka naanị ihe kpatara ya bụ na ha na-akpali ndị na-akwado ya na ụdị ọrụ miri emi na nke okike nke egwuregwu ahụ.
Ndị na-ewu ewu NFL na-akwado nzọ gụnyere:
Ndị otu a ga – emechi mmeri iji merie egwuregwu ahụ? Mmasị ole ka a ga – enweta na ngụkọta? Onye ga – abụ onye izizi ga – enye akara?
Tips dan Prediksi UFC 264 – Blog taruhan S
Mara ihe banyere Poker Online Online 2021